छोटकरीमा : विदेशमा भदौ २०७७
भदौ महिनाभर नेपालबाहिर कोरोना भाइरसको संक्रमणदर के-कस्तो रह्यो ? महिनाभर राष्ट्रियस्तरमा के कस्ता राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक एवं कोरोना लक्षित गतिविधिहरू भए ? सम्पूर्ण जानकारीहरू एकसाथ एकैठाउँमा थाहा पाउनुहोस्।
कोरोना सम्बन्धित :
पहिलो हप्ता :
साउन ३२ गतेसम्म २,१४,१२,६४३ जनामा देखिएको कोरोना भाइरस बढेर भदौ ६ गतेसम्ममा २,३२,२६,०४२ पुगेको थियो।
साउन ३२ गतेसम्म कोरोना भाइरसका कारण ७,६४,४७० जनाको मृत्यु भएकोमा भदौ ६ गतेसम्ममा ८,०५,०६८ पुगेको थियो।
भदौ ६ गतेसम्ममा विश्वभर १,५७,८४,७८६ जना कोरोना संक्रमित निको भइ घर फर्किएका थिए।
दोस्रो हप्ता :
भदौ ६ गतेसम्म २,३२,२६,०४२ जनामा देखिएको कोरोना भाइरस बढेर भदौ १३ गतेसम्ममा २,४९,६६,७१२ पुगेको थियो।
भदौ ६ गतेसम्म कोरोना भाइरसका कारण ८,०५,०६८ जनाको मृत्यु भएकोमा भदौ १३ गतेसम्ममा ८,४२,४७९ पुगेको थियो।
भदौ १३ गतेसम्ममा विश्वभर १,७३,४४, ३६० जना कोरोना संक्रमित निको भइ घर फर्किएका थिए।
तेस्रो हप्ता :
भदौ १३ गतेसम्म २,४९,६६,७१२ जनामा देखिएको कोरोना भाइरस बढेर भदौ २१ गतेसम्ममा २,७२,८३,७१८ पुगेको थियो।
भदौ १३ गतेसम्म कोरोना भाइरसका कारण ८,०५,०६८ जनाको मृत्यु भएकोमा भदौ २१ गतेसम्ममा ८,८७,३०५ पुगेको थियो
भदौ २१ गतेसम्म विश्वभर १,९३,७९, ५३० जना कोरोना संक्रमित निको भइ घर फर्किएका थिए।
चौथो हप्ता :
भदौ २१ गतेसम्म २,७२,८३,७१८ जनामा देखिएको कोरोना भाइरस बढेर भदौ ३१ गतेसम्ममा ३,००,२७,११९ पुगेको थियो।
भदौ २१ गतेसम्म कोरोना भाइरसका कारण ८,८७,३०५ जनाको मृत्यु भएकोमा यस शनिबार
९,४४,७१५ पुगेको थियो।
भदौ ३१ गतेसम्म विश्वभर २,१७,९४,०९३ जना कोरोना संक्रमित निको भइ घर फर्किएका थिए।
कोरोना भाइरस एवं लकडाउन सम्बन्धित प्रभाव :
चिनियाँ अधिकारीहरूले चीनमै विकास गरिएको कोभिड-१९ खोपलाई पहिलो आविष्कार 'पेटेन्ट' (सर्वाधिकार) प्रदान गरेका थिए। चिनियाँ खोप कम्पनी क्यानसिनो बायोलोजिक्स कर्पोरेसनलाई चीनको बौद्धिक सम्पत्ति नियामक संस्थाले ११ अगस्टमा 'एडी ५-एनकोभ' नाम दिइएको यस खोपको पेटेन्ट प्रदान गरिएको हो।
भारतीय पूर्वक्रिकेटर चेतन चौहानको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। जुलाई १९ मा कोरोना पुष्टि भएका ७३ वर्षीय चौहानको आइतबार उपचारका क्रममा मृत्यु भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए। उनी उत्तर प्रदेशको अमरोहा क्षेत्रबाट दुई पटक लोकसभा सदस्यमा समेत निर्वाचित भएका थिए।
विदेशबाट दक्षिण कोरिया भित्रिएका कोभिड–१९ संक्रमित तथा स्वदेशमा नै रहेका तर नियन्त्रणका उपायलाई उल्लङ्घन गर्ने बिरामीले उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नु पर्ने भएको थियो। कोरिया सरकारले सोमबारबाट लागु हुने गरी यो व्यवस्था गरेको हो।
चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीले चीनमा करिब चार महिनादेखि अस्पताल भर्ना भएका कुनै पनि कोरोना संक्रमितको मृत्यु नभएको जनाएका थिए। चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका वरिष्ठ अधिकृत गुओ यान्होङले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चिनियाँ रणनीति प्रभावकारी भएको दाबी गरेका थिए।
भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको स्वास्थ्य अवस्था ह्रासोन्मुख देखिएको भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा रहेको आर्मी रिसर्च एण्ड रिफरल हस्पिटलले जनाएको थियो। भारतीय पूर्वराष्ट्रपति मुखर्जी केही समय अघि सो अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। उनी अहिले पनि उपचाररत छन्।
अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि प्रशासनसम्बन्धी नियामक निकाय एफडिएले कोरोना भाइरसबाट निको भएकाहरूको रगतको प्लाज्मा तत्व अन्य बिरामीका लागि प्रयोग गर्न आकस्मिक अनुमति दिएको थियो। प्रारम्भिक परीक्षणमा यो उपचार विधि सुरक्षित भएको पाइएको एफडिएले जनाएको हो। अमेरिकामा करिब ७० हजार बिरामीमा यसको प्रयोग भएको बताइन्छ।
कोभिड-१९ को नियन्त्रणमा प्रभावकारी मोडल अवलम्बन गरेको दक्षिण कोरियाका अधिकारीले मुलुक फेरि नयाँ राष्ट्रव्यापी कोरोना प्रकोपको संघारमा पुगेको बताएका थिए। राइट-विङ प्रेस्बिटेरियन चर्चकोबाट पहिलोपटक १७ वटा प्रान्तमा कोरोना भाइरसका संक्रमित फेला परेका छन्। हरेक दिन कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्यामा तीन अंकले बढिरहेको छ।
कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिन थालेपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण अमेरिकामा ल्यापटपलगायतका शैक्षिक सामग्री सहजै प्राप्त गर्न समस्या भएको छ। एसोसियट प्रेस(एपी)मा प्रकाशित समाचारका अनुसार विषेश गरेर अनलाइन कक्षा सञ्चालनका क्रममा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु सहजै पाउन गाह्रो भएको र पाएपनि निकै ढिलो मात्रै प्राप्त हुने गरेको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्।
चीनले नोभेल कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेको दाबी गरेको छ। चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीले जुलाई २२ मा चिनियाँ कम्पनीले विकास गरेको कोभिड-१९ खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको बताएका छन्। यसअघि रुसले पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप विकास भएको दाबी गर्दै आपतकालीन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो।
भारतले कोरोना भाइरसको परीक्षण दरलाई आक्रामक रूपले अगाडि बढाएको छ। तीव्र रूपमा संक्रमित पत्ता लगाउने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने लक्ष्यका साथ एकैदिनमा १० लाखसम्मको परीक्षण गरेको छ। यसमध्ये पोजिटिभ दर १० प्रतिशतभन्दा कम छ।
वैज्ञानिकहरूले गरेको एक अध्ययनमा यूकेमा हजारौँ मानिसहरू अस्पतालबाटै कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भएका हुनसक्ने देखिएको छ। किङ्स कलेज लण्डनले यूकेका १० अस्पताल अनि इटलीको एक अस्पतालमा गरेको अध्ययनमा त्यहाँ उपचाररत प्रत्येक आठमध्ये एक बिरामीमा अस्पतालमै सङ्क्रमण भएको पाइएको हो।
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले अधिकारीहरुलाई कोरोना महामारी र टाइफूनले ठूलो खतरा निम्त्याउनसक्ने चेतावनी दिँदै यसबाट जोगिनका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनको स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्‍न अनुमानहरु गरिएकाबेला पार्टी बैठकमा उपस्थित किमले उत्तर कोरियाली अधिकारीहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
८४ वर्षीय भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको निधन भएको छ। उनकाे मस्तिष्कको शल्यक्रिया गर्नुअघि गरिएको परीक्षणमा कोरोना भाइरसकाे सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। शल्यक्रिया पछि पूर्वराष्ट्रपति मुखर्जी कोमामा पुगेका थिए।
कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि जारी गरिएका प्रतिबन्धविरुद्ध जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा हजारौं मानिसहरुले प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनमा सहभागी ३०० भन्दा बढीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बीबीसीका अनुसार शान्तिपूर्ण रुपमा गरिएको प्रदर्शनमा करिब ३८हजार मानिसहरु सडकमा उत्रिएका थिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को अगुवाइमा हुन लागेको कोरोनाविरुद्धको खोपको खोजी, उत्पादन र समान वितरणको विश्वव्यापी प्रयासमा अमेरिका सहभागी नहुने बताएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन भएकै कारण अमेरिका कोरोनाविरुद्धको खोप विकास र वितरणको विश्वव्यापी प्रयासमा अमेरिका सहभागी नहुने ट्रम्प प्रशासनले जनाएको थियो।
यस आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा भारतको अर्थतन्त्र ऐतिहासिक रूपमा २४ प्रतिशतले संकुचनमा गएको छ। अप्रिलबाट शुरु हुने भारतको आर्थिक वर्ष २०२०–२१ को जुनसम्मका तीनमध्ये दुई महिनामा लकडाउन रहेकाले अर्थतन्त्र २३ दशमलव ९ प्रतिशतले खुम्चिएको त्यहाँको केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ।
सिंगापुरका प्रधानमन्त्री ली हिसियन लुङले कोरोना भाइरस प्रकोपको सामना गर्न सरकारबाट गरेको गल्ती स्वीकार गर्दै माफी मागेका थिए। यीमध्ये महामारीका समयमा भएको एउटा त्रुटि आप्रवासी कामदारहरूसँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ। महामारीका समयमा समेत एकै कोठामा २० जनाभन्दा बढीलाई राखिएका कारण पनि कोरोना फैलिएको बताइएको छ।
कोभिड-१९ महामारीको घरेलु मामिला घटे पनि बाहिरी मुलुकबाट भित्रिनेको संख्या यथावत् रहेपछि चीनको नागरिक उड्डयन ब्युरोले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा अझै कडाइ गर्न थालेको छ। ब्युरोले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयनका प्रतिउडानमा यात्रुको संख्या ७५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने नियम जारी गरेको हो। साथै हरेक एअरलाइन्स कम्पनीले सबै यात्रुको कडाइका साथ स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने आदेश पनि ब्युरोले दोहोर्‍याएर दिएको छ।
कोरोना भाइरसका कारण आगामी वर्ष चार करोड सात लाख महिला अतिगरिबीतर्फ धकेलिने अनुमान गरिएको छ।संयुक्त राष्ट्रसंघले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कोरोना भाइरसको महामारीले पुरुष र महिलाबीचको खाडललाई पनि नाटकीय हिसाबले वृद्धि गर्ने देखिएको जनाइएको छ।
अमेरिकाको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सीडीसी) ले स्वास्थय अधिकारीहरुलाई ५० वटै राज्यहरुमा १ नोभेम्बरसम्म खोप वितरणको तयारी गर्न आग्रह गरेको छ। २७ अगस्तमा पठाइएका तीनवटा डकुमेन्टले दुईवटा खोप वितरणको विस्तृत विवरण सेट गरेको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ।
हलिउड अभिनेता ड्वेन जोनसनले केही साताअघि आफू र परिवारका सदस्यहरू काेराेना संक्रमित भएकाे र अहिले सबैजना निकाे भएकाे बताएका छन्। इन्स्टाग्राममार्फत ड्वेनले आफूसहित श्रीमती र दुई छोरीलाई कोरोना संक्रमण भएको जानकारी गराएका हुन्।
कोरोना भाइरसको संक्रमणको प्रभावकारी नियन्त्रण भएको भनिएको न्यजिल्यान्डमा मेको अन्तिमपछि पहिलो पटक एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। एक ५० वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको शुक्रबार अकल्यान्ड अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । उनको केही दिनदेखि सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
विश्‍वकै सम्पन्‍न राष्ट्रहरुमध्येको एक साउदी अरेबियाले हजारौं अफ्रिकी आप्रवासीहरुलाई कोभिड-१९ नियन्त्रणको प्रयास भन्दै जघन्य अवस्थामा थुनिएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा उक्त हिरासतमा रहेका आप्रवासीले मोबाइलबाट पठाएका तस्बिरहरुमा दर्जनौं पुरुषहरुलाई दयनीय अवस्थामा एउटा सानो बन्द कोठामा राखिएको देखिन्छ। अरबको गर्मीमा कमिजविहीन देखिएका ती पुरुषहरुलाई खाँदेर लाइनबद्ध राखेको देखिन्छ।
हलिउड अभिनेता रोबर्ट प्याटिन्सनलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि 'ब्याटम्यान' सुटिङ रोकिएको छ। फिल्म निर्माण कम्पनी वार्नर ब्रदरले प्रोडक्सन टिमकै एकजना आइसोलेसनमा बस्न गएको बताएका छन्।
आवश्यक सावधानी नअपनाए जनवरी १ सम्ममा अमेरिकामा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अहिलेको भन्दा दुई गुणाले बढेर ४ लाख पार गर्ने शुक्रबार वरिष्ठ स्वास्थ्य विद्हरुले बताएका छन्। कोभिड–१९ सम्बन्धी तयार पारिएको नयाँ मोडलका अनुसार अबको चार महिनामा अमेरिकामा थप २ लाख २४ हजार मानिसले ज्यान गुमाउन सक्छन् ।
अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको कडा लकडाउन दुई हप्ताका लागि थप गरिएको छ । कोभिड-१९ को नयाँ केसहरु पर्याप्त मात्रामा कम नभएकाले लकडाउन दुई हप्ता थप गरिएको मेलबर्नका अधिकारीले बताएको बीबीसीले जनाएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड– १९ विरुद्धको खोप निस्केपछि पनि आगामी वर्ष सन् २०२१ को मध्यसम्ममा मात्र उपलब्ध हुन सक्ने बताएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख वैज्ञानिकले यो खोप आइसकेपछि पनि ठूलो मात्रामा बजारमा आउनका लागि कम्तीमा पनि आगामी वर्षको मध्यसम्म लाग्न सक्ने बताएका हुन्।
कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्याको हिसाबमा भारत दोस्रो नम्बरमा पुगेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा ९० हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिएसँगै दोस्रो नम्बरको रहेको ब्राजिललाई पछाडि पार्दै भारत दोस्रो नम्बरमा पुगेको छ।
भारतको हिमाञ्चल प्रदेशका धार्मिक स्थलहरु बिहीबारदेखि खुल्ला हुने भएका छन्। कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनका कारण पाँच महिनादेखि बन्द रहेका धार्मिकस्थलहरु बिहीबारदेखि खोल्न लागेको भारतीय सञ्चारमाध्ययमले जनाएका छन्।
सोमबार डब्लूएचओको मुख्यालय जेनेभामा भएको भर्चुअल मिडिया ब्रिफिङका क्रममा महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसले अब विश्वका सबै देशले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताएका हुन्।महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसले जनस्वास्थ्य सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक स्थायित्वको आधार स्तम्भ भएको बताए। उनले कोरोना नै अन्तिम महामारी नहुने उल्लेख गर्दै भविष्यका लागि विश्व तयार रहनुपर्ने पनि बताए ।
रुसको सार्वभौम सम्पत्ति कोषले तीन करोड २० लाख डोज सम्भावित कोरोनाविरुद्धको खोप मेक्सिकोलाई बिक्री गर्ने भएको छ। रुसले कोभिड-१९ को सम्भावित 'स्पुतनिक-भी' खोप मेक्सिकोको एक मुख्य फर्मासिटिकल कम्पनीलाई बिक्री गर्ने सम्झौता भएको स्रोतले रोयटर्सलाई जानकारी दिएको छ। यो रुसको खोप निर्यातको दोस्रो सम्झौता(पहिलो काजकस्तान) भएकोसमेत बताइएको छ।
कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि अन्तिम चरणको ट्रायलमा रहेको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्राजेनेका कम्पनीको खोप परीक्षणमा सहभागी एकजनाले नकारात्मक प्रतिक्रिया देखाइ बिरामी परेपछि परीक्षण रोकिएको छ। अज्ञात कारणले बिरामी परेका एक बेलायती सहभागीका कारण परीक्षण केही समयका लागि रोकिएको कम्पनीले जनाएको हो।
पछिल्लो ६ महिनादेखि विश्वका लगभग सबै देशलाई संक्रमित गराइरहेको कोरोना भाइरसले जनस्वास्थ्य र आर्थिक संकट उत्पन्न गराइरहेकै बेला अर्को ठूलो आपत्काल – ‘पृथ्वीको बढ्दो तापमान’ पनि नजरअन्दाज गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कोभिड–१९ जस्तो तिव्र गतिमा नभएपनि यसले बिस्तारै वातावरणमा ठुल्ठुला परिवर्तन ल्याइरहेको प्रमाणित भइसकेको छ।
कोरोना भाइरसको महामारीले गरिब देशहरूलाई बाँकी विश्वभन्दा धेरै धक्का दिएको र विश्वव्यापी असमानता बढाइदिएको बीबीसीले गरेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ। तीस हजार मानिसमा गरिएको सर्वेक्षणले मार्च ११ मा महामारी पुष्टि भएयताको ६ महिनामा कसरी विभिन्न देशहरूलाई असर पारेको छ भनेर हेरेको थियो।
यूएईले फ्रन्टलाइनमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन अनुमति दिएको छ। तेस्रो चरणको मानवीय परीक्षणमा रहेको भनिएको कोरोनाविरुद्धको खोप आपतकालीन प्रयोगका गर्न अनुमति दिइएको ले जनाएको छ। चीनले उक्त खोप आफ्नो मुलुकमा फ्रन्टलाइनमा रहेका र उच्च जोखिम भएकाहरुलाई जुलाईदेखि नै लगाउन सुरु गरेको चिनियाँ अधिकारीहरुले बताएका थिए।
कोरोनाविरुद्धको चिनियाँ खोपलाई 'सर्वाधिकार' प्रदान
उत्तर प्रदेशका मन्त्री तथा पूर्वक्रिकेटर चेतन चौहानको कोरोनाबाट मृत्यु
अमेरिकामा 'प्लाज्मा थेरापी' उपचारलाई अनुमति - BBC News नेपाली
कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकोपको संघारमा दक्षिण कोरिया
अमेरिकामा ल्यापटपलगायतका शैक्षिक सामग्रीको अभाव
चीनले सुरु गर्‍यो कोरोनाविरुद्धको आपतकालीन खोप
अस्पतालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिम भएको यूकेको निष्कर्ष - BBC News नेपाली
भारतले भेट्टायो दैनिक १० लाख जनाको कोरोना परीक्षण गर्ने लक्ष्य
भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रहेनन्
कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी गरिएका प्रतिबन्धविरुद्ध हजारौं सडकमा, सयौं पक्राउ
भारतको अर्थतन्त्र पहिलो त्रैमासमा २४ प्रतिशत घट्यो
कोरोना नियन्त्रणमा कमजोरी भएको भन्दै सिंगापुरका प्रधानमन्त्रीले माफी मागे
'कुनै ठूलो चोट सहनुभन्दा फरक रहेछ कोरोना संक्रमण'
न्युजिल्यान्डमा मेपछि कोरोना संक्रमणबाट पहिलो व्यक्तिको मृत्यु
साउदी अरेबियाका 'नारकीय' हिरासतमा हजारौं अफ्रिकी आप्रवासी
रोबर्ट प्याटिन्सनलाई कोरोना पुष्टि, रोकियो 'ब्याटम्यान'को सुटिङ
अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा लकडाउन दुई हप्ता थप
रुसले ३ करोड २० लाख डोज खोप मेक्सिकोलाई बिक्री गर्ने
ट्रायलमा सहभागी बिरामी परेपछि अक्सफोर्डको खोप परीक्षण रोकियो
कोभिडका कारण बढ्यो विश्वव्यापी असमानता - BBC News नेपाली
अक्सफोर्डको खोप परीक्षण पुनः सुरु
यस हप्ताका आर्थिक, राजनीतिक एवं न्यायीक गतिविधिहरू :
बेलारुसमा भइरहेको राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्कोविरुद्धको आन्दोलनमा सरकारी टेलिभिजनकर्मी नै सहभागी भएका थिए। अगस्ट ९ मा भएको निर्वाचनको परिणाममा राष्ट्रपति लुकासेन्कोले धाँधली गरेको भन्दै भइरहेको प्रदर्शनमा सरकारी टेलिभिजनकर्मी पनि सहभागी भएका हुन्।
थाइल्यान्डमा राजनीतिक सुधारको माग गर्दै हजारौं सर्वसाधारणले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। राजधानी बैंककमा आइतबार गरिएका प्रदर्शनका सहभागीले संविधान तथा राजसंस्थाको सुधारको माग गरेका हुन्।
क्यानडाका अर्थमन्त्री बिल मोर्नीले आफू निकट सम्बन्ध रहेको एक सामाजिक संस्थालाई सरकारी कार्यक्रम दिलाउन भूमिका खेलेको आरोपमा छानबिन हुन थालेपछि राजीनामा दिएका थिए। अहिले मन्त्री मोर्नीका परिवारका सदस्यहरुसँग डब्लुई च्यारिटी नामको संस्थाको सम्बन्धमा अनुसन्धान शुरु भएको छ, र प्रारम्भिक विवरणमा च्यारिटीसँग सम्बन्ध रहेका प्रमाणहरु सार्वजनिक भएका हुन्।
मालीमा सैनिक ‘कू’ भएको छ । सेनाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई हिरासतमा लिएर सत्ता हातमा लिएको छ।त्यसअघि राष्ट्रपति इब्राहिम बुबाकारले टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए। साथै उनले संसद र सरकार भंग गरेको जानकारी पनि दिएका थिए।
भ्रष्टाचार विरोधी अभियानकर्तासमेत रहेका रुसका विपक्षी नेता एलेक्सेई नाभाल्नीलाई चियामा विष खुवाइपछि अचेत भएका छन्। अचेत भएका ४४ वर्षीय नाभाल्नीको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ।उनी राष्ट्रपति पुटिनका कडा आलोचकसमेत रहेको बताइएको छ।
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले बहिनी किम यो जोङलाई 'थप जिम्मेवारी' हस्तान्तरण गरेका छन्। दक्षिण कोरियाली जासुसी संस्था नेशनल इन्टेलिजेन्सका अनुसार किमले अझै पनि 'पूर्ण अधिकार' आफूमै राखेको तर तनावको स्तर कम गर्न कैयौं नीतिगत अधिकार बहिनीलाई सुम्पिएका बताएइको छ।
मेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इराकमा तैनाथ सबै अमेरिकी सेनालाई जतिसक्दो चाँडो स्वदेश फर्काउने पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। इराकमा हाल पाँच हजारभन्दा बढी अमेरिकी सैनिक तैनाथ रहेको बताइन्छ। अमेरिकी समर्थनप्राप्त इराकी प्रधानमन्त्री अल–काधिमी गत मे महिनामा देशको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। अमेरिका–इरानबीचको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धका कारण काधिमीले दुबै देशसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न निकै ठूलो चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ।
फेसबुकले थाइल्यान्डको राजसंस्थाको आलोचना गर्ने समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। थाइ सरकारले फेसबुकलाई कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएपछि फेसबुकले उक्त समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो। फेसबुकले बैंककले प्रतिबन्ध गर्न दबाब दिँदै कानुनी उपचार खोज्‍ने बताएपछि प्रतिबन्ध गरेको बीबीसीलाई बताएको छ।
सोनिया गान्धी अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म कंग्रेस पार्टीकी अन्तरिम अध्यक्ष बन्न तयार भएकी छिन्। कंग्रेस कार्यसमितिले सोमबार अन्तरिम अध्यक्षको प्रस्ताव राखेपछि उनले स्विकारेकी हुन्। कंग्रेस नेता वेणुगोपाल र रणदीपले कार्यसमितिको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा सोनियालाई अन्तरिम अध्यक्षको रूपमा प्रस्ताव गरेको भारतीय मिडियालाई जानकारी दिएका छन्।
सरकार विरोधी प्रदर्शन गरेको र प्रजातन्त्रको समर्थन गरेको आरोपमा हङ्‍कङमा प्रजातन्त्र पक्षधर दुई सांसदसहित १६ जना पक्राउ परेका छन्। बेइजिङका आलोचकसमेत रहेका मिडिया सञ्‍चालक 'जम्मी लाई' लाई पक्राउ परेको दुई सातापछि सांसदलाई पक्राउ गरिएको हो ।
फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सना मेरिनले काम गर्ने समयलाई ८ घण्टाबाट घटाएर ६ घण्टा बनाउन प्रस्ताव गरेकी छन्। सोमबार सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी समक्ष वाचन गर्दैगर्दा उनले उत्पादकत्व बढाइ काम गर्ने समय कटौति गर्न सकिने तर्क गरेकी हुन्। सो प्रस्ताव पारिद गराउन मेरिनले चार अन्य पार्टीबाट स्वीकृति हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ।
स्वास्थ्यमा समस्या देखिएका कारण बताउँदै जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले आज राजीनामा दिएका छन् । आबे लामो समयदेखि अल्सरेटिभ कोलाइटिसको समस्याबाट पीडित भएको र पछिल्लो समय स्वास्थ्य अवस्थामा बिग्रिएको बताइएको छ।
न्युजिल्यान्डको दुई मस्जिदमा ५१ जनाको मृत्यु हुने गरी आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई 'पेरोल' बिना जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ। न्यूजिल्यान्डको इतिहासमा यस्तो सजाय पाउने उनी पहिलो व्यक्ति हुन्। सन् २०१९ मो मार्चमा श्वेतहरुको अग्राधिकारका पक्षपाति अस्ट्रेलियन ब्रेन्टोन टारन्टले क्राइस्ट चर्चका दुई मस्जिदमा आक्रमण गर्दा ५१ जना मुसलमानको मृत्य भएको थियो।
भारतको सर्वोच्च अदालतले मानहानी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै एक रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँलै भूषणलाई एक रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला सुनाएको हो। भारतीय सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता भूषणका दुई वटा ट्वीटले मानहानी भएको फैसला गरेको हो।
नवौं चीन-दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक मञ्चअन्तर्गत साहित्यिक गतिविधि सुरू गरिएको छ। विविध सौन्दर्य विषयक चिनियाँ र दक्षिण एसियाली युवाहरूको साहित्यिक वाचनको पहिलो श्रृंखला सोमबारदेखि शुरू भएको हो।कोभिड-१९ का कारण अनलाइनबाट गरिएको यस गतिविधिको पहिलो चरणमा चीन, भारत र बंगलादेशका युवाहरूले भाग लिएका छन् भने क्रमशः नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान लगायत दक्षिण एसियाली युवाहरूले यो गतिविधिमा भाग लिने कार्यक्रम छ।
भारतले चिनियाँ सैनिकहरूले पूर्वी लद्दाखमा सीमाबारे गरिएको एउटा सहमति उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। चिनियाँ पक्षले उत्तेजक सैन्य गतिविधि गर्दै सीमामा विद्यमान स्थिति परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको तर आफ्नो सेनाले त्यसलाई विफल पारिदिएको दाबी भारतले गरेको छ।
आफू र केही साथीहरुको मुद्दाको निष्पक्ष न्यायिक निरुपणका लागि लड्दालड्दै कुर्दिस–टर्किस मानवअधिकारवादी वकिल इब्रु टिम्टिकको मृत्यु भएको छ। आफू र साथीहरुको मुद्दाको निष्पक्ष न्यायिक निरुपणको माग गर्दै भोकहड्तालमा बसेकी टिमटिकको अगस्ट २७ मा मृत्यु भएको हो। भोकहडताल बसेको २३८औं दिनमा उनको अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो ।
भारतसँग सीमा क्षेत्रमा जारी तनावका बीच चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङले ‘नयाँ आधुनिक समाजवादी तिब्बत’ निर्माणको प्रयास गर्न आह्‍वान गरेका छन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव तथा चीनको सेन्ट्रल मिलिटरी कमिसनका अध्यक्षसमेत रहेका जिनपिङले बेइजिङमा तिब्बतका विषयमा भएको एक उच्च स्तरीय बैठकमा यो आह्वान गरेका हुन्।
इजरायल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बीचको पहिलो व्यापारिक उडान दुबई उत्रिएको छ। बेन गुरिओन विमानस्थलबाट इजरायल तथा अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरुसहित उडेको इजरायली ध्वजाबाहक अल–एल विमान यूएईको अबुधाबीमा अवतरण गरेको हो।
गत मे ६ देखि बेपत्ता नेपालका लागि बेलायती पूर्वराजदूत रिचर्ड मोरिसको खोजीमा जुटेको ह्याम्पशायर प्रहरीले एलिस होल्ट जंगलमा एउटा शव फेला पारेको बताइएको छ। प्रहरीले मोरिसको निधनलाई शंकास्पद नमानेको पनि बेलायती सञ्‍चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
कम्बोडियाको भूतपूर्व खमेर रुज शासकनकालमा कमान्डर रहेका ‘कामरेड डच’ को बुधबार मृत्यु भएको छ। कम्बोडियामा खमेर रुज समूहले सत्ता चलाएका बेला ‘कामरेड डच’ कुख्यात ‘तुओल स्लेङ’ जेलका जेलर रहेका थिए। जहाँ कम्तीमा १४ हजार कम्बोडियाली नागरिकको नरसंहार भएको थियो।
भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेताहरूलाई पार्टी परित्याग गरेर सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीमा आउन एक केन्द्रीय मन्त्रीले सुझाब दिएका छन्। कंग्रेस पार्टीमा उनीहरूको भविष्य नभएको भन्दै केन्द्रीय मन्त्री रामदास अथावालेले यस्तो सुझाब दिएका हुन्। कंग्रेसका वरिष्ठ नेताहरू गुलाम नबी आजाद र कपिल सिबलले सो पार्टीबाट राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।
अष्ट्रेलिया सरकारले अन्य देशसँग गरिने विकास तथा रणनीतिक परियोजनासम्बन्धी सम्झौता गर्न राज्य सरकारलाई दिइएको अधिकार खारेज गर्न नयाँ विधेयक ल्याउने भएको छ। यस घोषणा गरेको नयाँ विधेयकअनुसार विदेशमन्त्रीले राज्य सरकार, स्थानीय सरकार र विश्वविद्यालयद्वारा गरिएका सहमति तथा सम्झौताहरू राष्ट्रिय हितविपरीत देखिए खारेज गर्न सक्नेछन्।
श्रीलंकाले सन् २०२१ मा बिमस्टेकको पाँचौं शिखर सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ। सोहि तयारी अनुसार अर्को वर्षको सुरुआतमा बिमस्टेक मुलुकका परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक हुने भएको छ। नेपालले सन् २०१८ मा काठमाडौंमा विमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन गरेको थियो।
पूर्वी लद्दाखमा जारी सैन्य तनावका बीच चीनका रक्षामन्त्री वेई फेंघेले भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग छलफलका लागि समय मागेका छन्। ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ अखबारमा प्रकाशित समाचारअनुसार दुवै नेताहरु अहिले सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को बैठकका लागि रुसको मस्कोमा छन्। अखबारले चिनियाँ रक्षामन्त्रीले शुक्रबारका लागि छलफल गर्ने पहल गरेको उल्लेख छ।
बेइरुतमा रहेका खोजकर्ताहरूले एक महिनाअघि त्यहाँ भएको शक्तिशाली विस्फोटनमा ध्वस्त भएको एउटा भवनको भग्नावशेषमा एकजना व्यक्ति अझै जीवितै हुनसक्ने सङ्केत पाएको बताएका छन्।बुधवारदेखि लेबननको राजधानीस्थित एउटा व्यावसायिक तथा आवासीय क्षेत्र मर मिखाइलमा एकजनाको मुटुको धड्कन थाहा भएको भन्ने अपुष्ट खबरहरू आएका थिए।
रूसका विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नी काेमाबाट बाहिर आएका छन्। डाक्टरहरुका अनुसार नाभाल्नीकाे स्वास्थ्य अवस्था सुधार भइरहेकाे छ। नाभाल्नीलाई 'नाेभिचाेक नर्भ एजेन्ट' नामकाे विष खान दिएर ज्यान लिने काेसिस भएकाे थियाे। उहाँकाे जर्मनीकाे राजधानी बर्लिनमा रहेकाे एक अस्पतालमा उपचार भइरहेकाे छ।
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अक्टोबर १५ भित्र पनि ठोस प्रगति नभए ब्रेक्जिट वार्ताबाट अलग हुने चेतावनी दिएका छन्। बेलायती अधिकारीहरु र युरोपेली युनियनका प्रतिनिधिबीच ब्रेक्जिटपछि बेलायत र युरोपेली युनियनबीचको व्यापार तथा अरु सम्बन्धका विषयमा वार्ता जारी छ। तर दुवै पक्ष आ-आफ्ना अडानमा रहेकाले ठोस प्रगति हुन सकेको छैन।
दुई अस्ट्रेलियन सञ्‍चारमाध्यमहरुले चीनमा रहेका आफ्ना संवाददाताहरुलाई फिर्ता बोलाएका छन्। अस्ट्रेलियन ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसनका बिल बिर्टलेस र अस्ट्रेलियन फाइनान्सियल रिभ्युका माइक स्मिथ मंगलबार सिड्नी फर्किएका हुन्।
अफगानिस्तानका उपराष्ट्रपतिलाई लक्षित गरेर बुधबार राजधानी काबुलमा आत्मघाती बम विस्फोट हुँदा दुई जनाको मृत्यु र अरु १२ जना घाइते भएको बताइएको छ। घटनाका बारेमा अहिलेसम्म कसैले पनि जिम्मेबारी नलिएको र घटनाका बारेमा अनुसन्धान शुरु भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले अमेरिकाका लागि खतरा मानेका १,००० भन्दा बढी चिनियाँ विद्यार्थीहरूको भिसा अमेरिकी सरकारले खारेज गरिदिएको छ। गत मे महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चिनियाँ सेनासँग सम्बन्ध भएका चिनियाँ नागरिकलाई लक्षित गरी गरेको एउटा घोषणाअनुरूप यो निर्णय आएको बताइएको छ।
भारतीय मिडियाको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला स्वतन्त्र मिडियाको निधन भएको भन्दै समवेदना अर्थात् शोकसन्देश प्रकाशित भएको छ। भारतीय अंग्रेजी दैनिक द हिन्दुको शुक्रबारको संस्करणमा भारतमा स्वतन्त्र मिडियाको अवसान भएको भन्दै शोक सन्देशको छापिएको हो।
माइक्रोसफ्टका अनुसार राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र आगामी चुनावका लागि उनका प्रतिस्पर्धी डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार जो बाइडन दुवैको चुनावी अभियान साइबर हमलाको निसानामा परेका छन्।माइक्रोसफ्टले रुस, चीन र इरानका लागि काम गर्ने ह्याकरहरूले अमेरिकामा आउँदो नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय चुनाव अभियानमा संलग्न रहेका व्यक्ति र समूहहरूको सूचना अनधिकृत रूपमा लिने प्रयास भएको बताएको हो।
अफगानिस्तानमा लामो समयदेखि जारी हिंसाको अन्त्य गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यले कतारको दोहामा वार्ता हुन लागेको छ। अफगानिस्तानको सरकारी वार्ता टोली र तालिबान समूहसँगको वार्ता टोली शनिबार हुने शान्ति वार्ता गर्नका लागि कतारको दोहा पुगिसकेको बताइएको छ। अफगानिस्तानमा जारी करिब दुई दशक लामो द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी मध्यस्थतामा तालिबान समूहसँग अफगानिस्तान सरकारले वार्ता गर्ने तयारी गरेको हो।मालीको मध्य क्षेत्रको एक गाउँमा सशस्त्र हतियारधारीले आक्रमण गरी कम्तीमा आठ सर्वसाधारण नागरिकको हत्या गरेका यहाँका स्थानीय सञ्चारमाध्यमले शुक्रबार जनाएका छ। मालीको मध्य क्षेत्रीय शहर बंकास नजिकैको एक गाउँमा हतियारधारीहरुले बुधबार सो हमला गरेका थिए । ती अज्ञात हतियारधारीले गरेको आक्रमणमा आठ जना मारिएका र अरु तीन जना घाइते भएका बताइएको छ।
भारत र चीनबीच सीमा विवादका कारण तनाव कायम रहेका बेला एक चिनियाँ कम्पनीले भारतका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च राजनीतिज्ञदेखि सांसद, कलाकार, पत्रकार र स्थानीय राजनीतिक कार्यकताहरूको ‘निगरानी’ गरेको दाबी गरिएको छ। भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ को सोमबारको संस्करणमा प्रकाशित खोजमूलक रिपोर्टमा त्यस्तो खुलासा गरिएको हो।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले बलात्कारीलाई सार्वजनिक चोकमा झुन्ड्याएर मार्नुपर्ने बताएका छन्। उनले अल जाजिरासँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा सो कुरा बताएका हुन्। पाकिस्तानको लाहोरमा गत हप्ता एक महिला आफ्ना बच्चाकै अगाडि सडकमा सामूहिक बलात्कृत भएकी थिइन्। पञ्जाव प्रान्तको लाहोर सहरनजिकै कारमा रहेकी महिलालाई कारबाट सडकमा निकालेर बलात्कार गरिएको थियो।
चीनले भारतसँग तत्काल आफ्ना गलत गतिविधि सुधार्न र छिटोभन्दा छिटो चिनियाँ सेनासँग निहुँ नखोज्न आग्रह गरेको छ। उसले हालै एलएसीमा भएको संघर्षका लागि भारत जिम्मेवार रहेको पनि दाबी समेत गरेको छ।
रुसका विपक्षी नेता एवं रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कट्टर आलोचक एलेक्सी नाभाल्नीको स्वास्थ्यमा सुधार आएको अस्पतालले जनाएको छ। जर्मनीको बर्लिनस्थित च्यारिटी अस्पतालका चिकित्सकहरूका अनुसार नाभाल्नीलाई दिइएको कृत्रिम श्वासप्रश्वास यन्त्र हटाइएको छ। उनी हाल अस्पतालको शय्याबाट उठेर सामान्य हिँडडुल गर्न थालेको बताइएको छ।
बेलारुस प्रदर्शन : सरकारी टेलिभिजनकर्मी नै राष्ट्रपतिविरुद्धको आन्दोलनमा
थाइल्यान्डमा सरकारविरोधी प्रदर्शन
मालीमा सैनिक कू, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हिरासतमा
थाइल्यान्डमा राजसंस्थाको आलोचना गर्ने फेसबुक समूहमाथि प्रतिबन्ध
अधिवेशन नभएसम्म सोनिया गान्धी अन्तरिम अध्यक्ष
हङ्‍कङका प्रजातन्त्र पक्षधर दुई सांसदसहित १६ जना पक्राउ
काम गर्ने समयलाई घटाएर ६ घण्टा बनाउन फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव
क्राइस्ट चर्चका आक्रमणकारीलाई 'पेरोल' बिना जन्मकैदको सजाय
भारतीय सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रशान्त भूषणलाई एक रुपैयाँ जरिवाना
चीन-दक्षिण एसिया साहित्यिक गतिविधि सुरू
लद्दाखमा फेरि भारत र चीनबीच सैन्य तनाव - BBC News नेपाली
इब्रु टिमटिक : जसले न्यायका लागि भोकै लडेको २३८औं दिनमा प्राण त्यागिन्
यूएई पुग्यो इजरायलको पहिलो व्यापारिक उडान
खमेर रुज जेलका कमान्डर ‘कामरेड डच’ को मृत्यु
भारतीय कंग्रेसका नेताहरूलाई भाजपामा प्रवेश गर्न केन्द्रीय मन्त्रीको सुझाब
श्रीलंकाले अर्को वर्ष बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन गर्ने
सीमा विवाद : चीनले मस्कोमा भारतसँग वार्ताका लागि पहल थाल्यो
बेइरुत विस्फोटको एक महिनापछि भग्नावशेषमा एकजना मानिस 'जीवितै हुनसक्ने' सङ्केत - BBC News नेपाली
रुसका विपक्षी नेता तथा पुटिनका आलाेचक नाभाल्नी 'काेमा' बाहिर
अक्टोबर १५ भित्र सम्झौता नभए ब्रेक्जिट वार्ताबाट अलग हुने बेलायतको चेतावनी
विवादका बीच अस्ट्रेलियन पत्रकारले चीन छोडे
अफगानिस्तानमा उपराष्ट्रपतिलाई लक्षित गरेर विस्फोटन, दुईको मृत्यु, १२ घाइते
'ट्रम्प र बाइडन दुवै रुस, चीन र इरानका ह्याकरको निसानामा' - BBC News नेपाली
अफगान सरकार र तालिवानबीच दोहामा शान्ति वार्ता हुँदै
मालीमा हतियारधारीद्वारा आठ सर्वसाधारणको हत्या
भारतीय विशिष्टहरूमाथि चीनले निगरानी गरेको दाबी
गलत गतिविधि रोक्‍न भारतलाई चीनको आग्रह
रुसी विपक्षी नेता नाभाल्नीको स्वास्थ्यमा सुधार
अमेरिकी पूर्व प्रथम महिला मिसेल ओबामाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्को आलोचना गरेकी थिइन्। नोभेम्बर ३ मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि जो बाइडेनलाई औपचारिक रुपमा डेमोक्रेटिक उमेदवार घोषणा गर्नका लागि शुरु भएको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओबामाले ट्रम्पको आलोचना गरेकी हुन्।
पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले क्यालिफोर्नियाकी सिनेटर कमला ह्यारिसलाई उपराष्ट्रपतिको उमेदवार घोषणा गर्नु बाइडेनको सबैभन्दा उत्तम निर्णय भएको बताउँदै समर्थन जनाएका छन्।
डेमोक्र्याटिक पार्टीको सम्मेलनले जो बाइडनलाई औपचारिक रूपमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनाएको थियो। डेमोक्र्याटिक पार्टीबाट राष्ट्रपति बनेका बिल क्लिन्टन र जिमी कार्टर तथा रिपब्लिकन पार्टीको सरकार हुँदा विदेशमन्त्री रहेका कोलिन पावलले जो बाइडनलाई समर्थन गरेका थिए।
अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका छन्।डेमोक्रेटिक पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति ओबामाले राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रपति पदलाई र त्यसको जिम्मेवारीलाई 'एक अर्को रियालिटी शो' का रुपमा लिएको आरोप लगाएका थिए।
सोमबारदेखि शुरु भएको डेमोक्रेटिक पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनको तेस्रो दिन कमला ह्यारिसले उपराष्ट्रपति उम्मेदवारको टिकट औपचारिक रुपमा प्रदान गरिएको थियो। राष्ट्रपतिका उम्मेदवार जो बाइडेनले ह्यारिसलाई आफ्नो 'रनिङ मेट' का रुपमा चयन गरेका हुन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पकी दिदी मारियन ट्रम्प ब्यारीले आफ्नो भाइको कटु आलोचना गरेको श्रव्य सामग्री सार्वजनिक भएको थियो। उनले बोलेको कुरालाई गोप्य रूपमा रेकर्डिङ गरिएको सो सामग्रीमा ट्रम्पकी दिदीले भाइलाई "सिद्धान्तहीन, ढँटुवा, नक्कली तथा निर्दयी" भनेकी छन्। राष्ट्रपतिकी भतिजी मेरी ट्रम्पले उक्त गोप्य रेकर्डिङ गरेकी थिइन्।
अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि नोभेम्बरमा हुने निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका वरिष्ठ सल्लाहकार केलिन कनवेले राजीनामाको घोषणा गरेकी छन् । ५३ वर्षीया कनवेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अगस्त अन्तिममा आफूले राजीनामा दिने घोषणा गरेकी हुन् । उनले अब आफ्नो सन्तानप्रति केन्द्रित हुने र उनीहरुलाई ड्रामाभन्दा पनि 'मामा' बनेर हेरचाह गर्ने बताएकी छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय चुनावमा धाँधली गर्न विपक्षीहरू लागिपरेको दाबी गरेका छन् । रिपब्लिकन दलले दोस्रो कार्यकालका निम्ति उनको उम्मेदवारी निश्चित गरेलगत्तै ट्रम्प मञ्चमा आएर एक घण्टा सम्बोधन गरेका थिए । यद्यपि, रिपब्लिकन दलको राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले सम्बोधन गर्दै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भने थिएन ।
अमेरिकी पहिलो महिला मेलानिया ट्रम्पले ह्‍वाइट हाउसबाट रिपब्लिकन पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै जातीय सद्‌भावका लागि अपिल गरेकी छन्। विस्कन्सिनमा पछिल्लो समय गोली हानी मारिएका २९ वर्षीय काला जातिका युवक ज्याकोब ब्लेक घटनाले निम्ताएको जातीय दमनविरुद्ध भइरहेको प्रदर्शनमा प्रहरीमाथि प्रदर्शनकारीहरुको निरन्तरको आक्रमण भइरहेका बला उनले 'हिंसा र लुटपाट बन्द गर्न' अपिल गरेकी हुन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिमा जो बाइडेनले जिते अमेरिकी सपना 'ध्वस्त' पार्ने चेतावनी दिएका छन्। रिपब्लिकन कन्भेन्सनको अन्तिम रात सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले ड्रेमोक्रेटिक उमेदवार बाइडेनलाई 'अमेरिकी महानताको विनाशकर्ता' को संज्ञा दिएका छन्।
अमेरिकाको पोर्टल्याण्डमा हिंसक बनेको प्रदर्शनलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उनका प्रतिस्पर्धी जो बाइडन चर्को आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। ट्रम्पले पोर्टल्याण्डका डेमोक्र्याट मेयर टेड विलरलाई 'सहरमा मृत्यु र विध्वंशको बाटो खोलेको' आरोप लगाएका छन्। बाइडनले भने राष्ट्रपति ट्रम्पले 'गैरजिम्मेवार तरिकाले हिंसा उकासेको' र अमेरिकामा 'घृणा र विभाजनको आगो फुकेको' आरोप लगाएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हालैका हिंसक झडपमा आफ्ना समर्थकहरूको भूमिकाको बचाउ गरेका थिए। उनले विन्सकन्सिन राज्यमा दुई जनाको हत्याको आरोप लागेका किशोर र ओरेगनमा भएको झडपमा सङ्लग्न समर्थकहरूले आत्मरक्षामा गरेको बताएका हुन्।
आउँदो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार जो बाइडनले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई हिंसा गलत हो भन्न चुनौती दिएका छन्। बाइडनले ट्रम्पलाई 'देशमा हिंसा भड्काउने कमजोर र विशाक्त नेता' भनेका थिए।
संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प केनोशा पुगेसँगै प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका अश्वेत ज्याकोब ब्लेकका बाबुले छोराको जीवनमाथि राजनीति नगर्न आग्रह गरेका थिए। ब्लेकलाई प्रहरीले गोली हानी घाइते बनाएपछि पछिल्ला साताहरुमा अमेरिकामा रंगभेदविरुद्धको आन्दोलन थप चर्किएको हो। राष्ट्रपति ट्रम्पले केनोशा भ्रमणका क्रममा प्रहरी अधिकारीहरुसँग भेट गर्नेछन्। तर, ब्लेकको परिवारलाई भने उनले नभेट्‌ने जनाइएको थियो।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार नर्थ क्यारोलिना राज्यका मतदाताहरुलाई नोभेम्बर निर्वाचनमा दुई पटक मतदान गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीले मतदाताहरुलाई एकपटक प्रत्यक्ष र अर्कोपटक हुलाकमार्फत मतदान गर्न आग्रह गरेका हुन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रहरीले पोर्टल्यान्ड आन्दोलनका क्रममा भएको झडपमा चलाइएको गोली व्यक्ति पक्राउ गर्ने क्रममा दाबी गरेको छ। यसअघि पोर्टल्यान्डमा 'ब्ल्याक लाइफ म्याटर्स' का प्रदर्शनकारी र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकबीच भएको झडपमा गोली चलाउने ४० वर्षीय माइक रेनोहीमाथि अनुसन्धान भइरहेको थियो।
आफ्नो एक बयानका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रशस्तै आलोचना खेप्न थालेका छन्। युद्धमा मारिएका अमेरिकी सैनिकहरूलाई 'हरूवा' र 'बुद्धु' भनेकोमा उनको आलोचना भएको हो। ट्रम्पको यो बयान सबैभन्दा पहिला 'द एट्लान्टिस' पत्रिकामा छापिएको बिबिसीले जनाएको छ। त्यसपछि यसको अंशलाई एसोसिएटेड प्रेस(एपी) र फक्स न्यूजले प्रकाशित गरेको बिबिसीको समाचारमा उल्लेख छ।
संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको निर्वाचन नजिकिएसँगै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका प्रतिस्पर्धी डेमोक्रेटिक उमेदवार जो बाइडेन एक-अर्काप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप विकास र वितरणका विषयमा पनि ट्रम्प र बाइडेनले एक-अर्कालाई आरोप लगाउनुका साथै आलोचनासमेत गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरोनाविरुद्धको खोप नोभेम्बरअघि नै आउने संकेत गरेका छन्। उनले नोभेम्बरको निर्वाचनअघि नै कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध हुने बताउँदै डेमोक्रेटिक उमेदवार बाइडेनले 'खोपविरुद्ध लापरबाही रुपमा अभिव्यक्ति' दिइरहेको आरोप लगाएका छन्।
अमेरिकामा राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुन दुई महिनाभन्दा कम समय रहेको बेला राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका लागि खुसीको खबर आएको छ: नोबेल शान्ति पुरस्कारका उनको नाम मनोनयनमा परेको छ। नर्वेका एक नेताले ट्रम्पले इजरेल र यूएईबीच शान्ति सम्झौता गर्न भूमिका खेलेको भन्दै उनको मनोनयन गरेका हुन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायल र बहराइनबीच सम्बन्ध सुधारका लागि सम्झौता भएको जनाएका छन्। करिब एक महिना अगाडि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र इजरायलबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न शान्ति सम्झौता भएको थियो।
ट्रम्प छोडेर जो बाइडनलाई समर्थन गर्दै रिपब्लिकन नेताहरू - BBC News नेपाली
दिदी मारियनको दृष्टिमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प 'ढँटुवा र सिद्धान्तहीन' - BBC News नेपाली
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रपति ट्रम्पकी वरिष्ठ सल्लाहकारद्वारा राजीनामाको घोषणा
जातीय सद्‌भावका लागि मेलानिया ट्रम्‍पको अपिल, भनिन्- तपाईंहरु एक्लो हुनुहुन्‍न
अमेरिकामा प्रदर्शन जारी, ट्रम्प र बाइडनबीच आरोप-प्रत्यारोप - BBC News नेपाली
ट्रम्पद्वारा हिंसाको आरोप लागेका समर्थकको बचाउ - BBC News नेपाली
छोराको जीवनमाथि राजनीति नगर्न ट्रम्पलाई ज्याकोबका बाबुको आग्रह
नर्थ क्यारोलिनाका मतदातालाई दुई पटक मतदान गर्न ट्रम्पको आग्रह
पोर्टल्यान्ड आन्दोलनमा गोली चलाउने व्यक्ति पक्राउ गर्ने क्रममा मारिए
भारत-चीन सीमा विवाद :
पछिल्लो समय भारत-चीनबीचको सीमा विवादका कारण बढ्दो तनावका बीच फेरि अर्को तनाव सिर्जना भएको छ। गत साता चिनियाँ सेनाले पाँच भारतीय नागरिकहरुलाई सीमा क्षेत्रबाट अपहरण गरेको आरोप लगाइएको छ। ५ सेप्टेम्बरमा पहिलो पटक अरुणाञ्‍चल प्रदेशका सांसद तापिर गाओले ट्विट गर्दै चिनियाँ सेनाले भारतीय नागरिकलाई अपहरण गरेको जानकारी गराएका थिए। सांसद गाओले ३ सेप्टेम्बरमा सीमा क्षेत्रबाट भारतीय नागरिकलाई अपहरण गरेको बताएका थिए। उनले यस विषयमा कुनै थप विवरण दिएका छैनन्।
लद्दाखमा भारतीय सेनाले सीमास्थित नियन्त्रणरेखा उल्लङ्घन गरेको चिनियाँ आरोपको भारतले खण्डन गरेको छ। बरु उक्त दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा दुई पक्षबीच तनाव उत्पन्न हुँदा चिनियाँ पक्षले हावामा गोली हानेको नयाँ दिल्लीले दाबी गरेको छ।
लामो समयदेखि सीमा विवादका कारण तनावमा रहेका भारत र चीनबीच द्वन्द्वको स्थितिबाट 'छिट्टै पछि हट्‍ने' सहमति भएको छ। यसअघि भारत-चीनबीच एकअर्काले सीमा क्षेत्रमा गोली हानेको आरोप लगाएका थिए भने भारतले चिनियाँ सेनाले आफ्ना पाँच नागरिकलाई अपहरण गरेको आरोप लगाएका थिए।
चीनले ५ भारतीय नागरिकलाई अपहरण गरेको आरोप, चीन मौन
लद्दाखको सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाले पहिला गोली चलाएको भारतको आरोप - BBC News नेपाली
द्वन्द्वको स्थितिबाट 'छिट्टै पछि हट्‍ने' भारत-चीनबीच सहमति
फिलिपिनो सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार फिलिपिन्सको दक्षिणी क्षेत्र सुलु प्रान्तको जोलो सहरमा गराइएको विस्फोटमा परी ६ जना सैनिक र ५ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको हो। विस्फोटमा परी कम्तीमा ४० जना घाइते भएका छन्।
भारतको मध्यप्रदेशस्थित एक घरका पाँचजना सदस्यको उनीहरूकै घरमा झुन्ड्याएर हत्या गरिएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। परिवारका सबै सदस्यलाई झुन्ड्याइएको भन्ने सूचनाका आधारमा गएको प्रहरीले उनीहरूको हत्या गरिएको पाइएको जनाएको हो। आइतबार राति सो घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ।
इजरायलमा पुरातात्विक खोजीका लागि स्वयमसेवकका रपमा काम गरेका एक युवाले ११०० वर्ष अगाडिका ४२५ वटा सुन(८४५ ग्राम तौल)का सिक्का जमिनमा गाडिएको अवस्थामा फेला पारेका छन्। ती सिक्काहरु इस्लामिक कालको भएको बताइएको छ।
आर्जेन्टीनाका फुटबल खेलाडी लिओनेल मेस्सीले आफ्नो सम्पूर्ण व्यावसायिक खेल जीवन गुजारेको स्पेनी क्लब बार्सिलोनाबाट अलग्गिन चाहेको जनाएका छन्। उनका वकिलहरूले फ्याक्स पठाएर क्लबसँगको करारमा रहेका उनलाई तत्काल जान दिन मिल्ने प्रावधानको प्रयोग गरिएको बताएका छन्।
टिकटकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) केभिन मेयरले नियुक्त भएको तीन महिनामै अर्थात् बिहीबार राजीनामा दिएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टिकटकलगायत चिनियाँ एपले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपेको बताउँदै ती एपलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि मेयरले राजीनामा दिएका हुुन्।
अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त(पर्वान पान्तको चरिकर सहर)मा आएको बाढीका कारण कम्तीमा ७० जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीको समयमा मानिस सुतिरहेका थिए भने मृत्यु हुनेहरुमा अधिकांश महिला तथा बालबालिकाहरु रहेको बताइएको छ।
भारतीय प्रहरीले केही महिनाअघि राजधानी दिल्लीमा भएका धार्मिक दङ्गाका क्रममा "गम्भीर प्रकृतिको मानवाधिकार उल्लङ्घन" गरेको आरोप एक अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टर्न्याश्नलले लगाएको छ।उक्त संस्थाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भारतीय प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई कुटपिट गरेको, हिरासतमा लिइएका व्यक्तिहरूलाई यातना दिएको र कुनैकुनै घटनामा हिन्दूवादी दङ्गाकारीहरूको साथ लागेर दङ्गामा सहभागी समेत भएको जस्ता कुराहरू उल्लेख गरेको हो।
युट्युबले यस वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा एक करोड १४ लाखभन्दा बढी भिडियो हटाएको छ। कम्पनीको मापदण्ड तथा निर्देशिकाविपरीत रहेका भिडियोहरू हटाइएको कम्पनीद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ। भिडियोबारे प्राप्त उजुरी र आफैँले गरेको मूल्यांकनका आधारमा ती भिडियो हटाउनुपरेको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ।
जापानमा हेसेन टाइफून आउनसक्ने भन्दै दुई लाखभन्दा बढी मानिसहरुलाई ठाउँ खाली गर्न आदेश दिइएको छ। आइतबार १६० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा आउने उक्त आँधीसँग भारी वर्षा हुनसक्ने बीबीसीले जनाएको छ। यो आँधी आइतबार जापानको क्युशुमामा आइपुग्‍ने र सोमबार दक्षिण कोरिया पुग्‍न जनाइएको छ।
उत्तर भारतस्थित तीर्थस्थल हृषीकेशमा गङ्गा नदीमाथि रहेको एउटा पुलमा आफ्नो नग्न भिडिओ खिचेको आरोपमा एक फ्रान्सेली महिला पक्राउ परेकी छन्। ती महिलाले 'लक्ष्मण झुला' भनिने उक्त पुलमा खिचेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा देखा परेको थियो।ती महिलालाई भारतको इन्टरनेट कानुनअन्तर्गत मुद्दा परेको हो।
नवौं चीन-दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक मञ्चअन्तर्गत साहित्यिक गतिविधि सुरू गरिएको छ। विविध सौन्दर्य विषयक चिनियाँ र दक्षिण एसियाली युवाहरूको साहित्यिक वाचनको पहिलो श्रृंखला सोमबारदेखि शुरू भएको हो। कोभिड-१९ का कारण अनलाइनबाट गरिएको यस गतिविधिको पहिलो चरणमा चीन, भारत र बंगलादेशका युवाहरूले भाग लिएका छन् भने क्रमशः नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान लगायत दक्षिण एसियाली युवाहरूले यो गतिविधिमा भाग लिने कार्यक्रम छ।
स्पेनिस ला लिगा फुटबलको नयाँ सिजनको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। सोमबार सार्वजनिक २०२०-२१ खेल तालिकाअनुसार नयाँ सिजन पहिलो एल क्लासिको अक्टोबरमा हुने भएको छ। तालिका अनुसार बार्सिलोना र रियल मड्रिडबीचको एल क्लासिको भिडन्त अक्टोबर २५ मा क्याम्प नाउमा हुनेछ। यस्तै दोस्रो एल क्लासिको सान्टियागो बर्नाबेउमा भिडन्त अप्रिल ११ हुनेछ।
बेलायत सरकारले कोरोनाको कारण जनाउँदै ब्रिगेड अफ गोर्खाजका निम्ति यस पटक ब्रिटिस आर्मीमा ३ सय ४० र सिंगापुर पुलिस फोर्समा १ सय ४० जना मात्र भर्ती गर्ने भएको छ। गत वर्ष ब्रिटिसमा ४ सय ३२ र सिंगापुरमा २ सय २० भर्ती लिइएको थियो।
भारतले पब्जीसहित १ सय १८ वटा चिनियाँ एप्समाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। लद्दाखमा केही दिनयता भारत र चीनबीच तनाव शुरु भएपछि भारतले डाटा सुरक्षाको कारण देखाउँदै थप एक सयभन्दा बढी एप्सहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो।
भारतको बेंगलुरुमा सेप्‍टेम्बर ७ देखि मेट्रो रेल सञ्चालनको तयारी थालिएको छ । तर, रेल सञ्‍चालनसँगै केही प्रावधानहरु पनि तोकिएका छन्। बेंगलुरु मेट्रो रेल कर्पोरेसनले बेंगलुरु सहरको नम्मा मेट्रो रेल सेवा ७ सेप्टेम्बरबाट पुन: नियमिह हुन थालेको जनाएको छ। तत्कालका लागि मेट्रो सेवा बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म र साँझ ४ देखि ७ बजेसम्म सञ्‍चालन हुनेछ।
अनुमतिविना एक महिलाले अस्ट्रेलिया आयात गरेको २६,००० अस्ट्रेलियाली डलर मूल्य पर्ने एउटा हातेझोला जलाइने भएको छ। फ्रान्सस्थित सेन्ट लरेन्ट बुटिकबाट ल्याइएको विलासी झोला पर्थबाट अस्ट्रेलियाली सीमासुरक्षा बलका सदस्यले जफत गरेका हुन्। गोहीको छालाबाट निर्मित सामानहरू अस्ट्रेलियामा आयात गर्न पाइने भए पनि पसलेहरूले ७० अस्ट्रेलियाली डलर तिरी अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।
फ्रान्सको एउटा गाउँमा एक वृद्ध मानिसले झिँगा धपाउने प्रयास गर्दा उनको घरमा विस्फोटन भएको छ। रातिको भोजन गर्न बस्न लागेको बेला एउटा झिँगाले दुःख दिएपछि ८० वर्षभन्दा बढी उमेरका ती व्यक्तिले झिँगा र कीराफट्याङ्ग्रा धपाउन प्रयोग गरिने विद्युतीय साधन चलाएका थिए। तर त्यही बेला घरमा ग्यास चुहिएकाले उक्त साधनसँग घर्षण हुँदा त्यहाँ विस्फोटन भयो।
अवैध निर्माण गरेको भन्दै बृहन्‍मुम्बई महानगरपालिका (बीएमसी)ले बलिउड अभिनेत्री कंगना रनावतको कार्यालय भत्काएको छ। बीएमसीले मंगलबार क‌ंगनाको कार्यालयमा २४ घण्टाभित्र सामान हटाउन भन्दै नोटिस पठाएको थियो।कंगनाका तर्फबाट उनका वकिलले लिखित जवाफ दिए पनि चित्तबुझ्दो नभएको बताउँदै बीएमसीले उनको कार्यालय भत्काएको हो।
अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा लागेको डढेलो ९ लाख हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको छ। विभागले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा डढेलोबाट हालसम्म ८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । डढेलोका कारण ३ हजार ३ सयभन्दा बढी संरचना ध्वस्त भएको उल्लेख छ।
सात अर्ब वर्षअघि ब्रह्माण्डमा दुईवटा ब्ल्याक होल (अर्थात् कृष्णगर्त) को विलय हुँदा गुरुत्वीय तरङ्ग फैलियो। त्यो घटनालाई अहिलेसम्म थाहा पाइएको ब्ल्याक होलहरूको सर्वाधिक ठूलो विलय मानिएको छ। गत वर्ष बल्ल उक्त खगोलीय घटनाको सङ्केत पृथ्वीमा आइपुग्यो। मे २०१९ मा अमेरिका र इटलीमा जडित लेजर डिटेक्टरहरूले त्यसको सङ्केत प्राप्त गरे।
बासस्थान र आहार प्रजातिको अत्यधिक दोहनका कारण करिब ५० वर्षमा विश्वभर चरा, माछा, स्तनधारी, उभयचर र सरिसृप (घस्रिने) लगायतका जीवमा ६८ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको ७५ औं महासभाको पूर्व सन्ध्यामा बिहीबार डब्लूडब्लूएफले सार्वजनिक गरेको मा अत्यधिक मात्रामा माछा मारिँदा, जंगलमा डढेलो लाग्दा र मानवीय क्रियाकलापले वन्यजन्तुको आश्रयस्थल विनाश हुँदा दुई तिहाई जीव घटेको उल्लेख छ।
ओस्कर अवार्डबाट सम्मानित चर्चित भारतीय संगीतकार एआर रहमानमाथि कर छलीको आरोप लागेको छ। आयकर विभागले मद्रास उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले रहमानलाई नोटिस जारी गरेको हो। आयकर विभागको अपिलमा जस्टिस टीएस शिवंगनानम र जस्टिस वी भवानी सुब्बोरोयनको ब्याचले रहमानविरुद्ध नोटिस जारी गरेको हो। आयकर विभागका अनुसार रहमानले उनको परोपकारी ट्रस्ट एआर रहमान फाउन्डेशनको प्रयोग गरी कर छली गरेको हो।
भारतका सामाजिक अभियन्ता स्वामी अग्निवेशको ८० वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। 'हिन्दुस्तान टाइम्स'का अनुसार कलेजोको समस्याका कारण मंगलबार अस्पताल भर्ना गरिएका उनको शुक्रबार निधन भएको हो।
पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) बुधबार राति मेट्जको सामना गर्दै छ। साविक विजेता पीएसजीले फ्रेन्च लिगवान फुटबलमा बुधबार राति मेट्जको सामना गर्न लागेको हो। खेल नेपाली समयअनुसार राति १२:४५ मा सुरु हुनेछ।
डेनमार्कको एउटा तेल ट्यांकरले उद्धार गरेका आप्रवासीहरूको एक समूहलाई ४० दिनपछि इटालीले आफ्नो भूभागमा ओर्लन दिएको छ। एक गर्भवती महिलासहित २७ जना आप्रवासीले अगस्ट २ मा लिबियाबाट युरोपको यात्रा तय गरेका थिए। उनीहरू चढेको डुंगा डुब्न लागेपछि डेनिस ट्यांकर मेयर्स्क एटिएन्नले उनीहरूको उद्धार गरेको थियो।
फिलिपिन्सको जोलोमा दुई वटा बम विस्फोट : कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु, ४० घाइते
भारतमा एकैपरिवारका पाँच सदस्यको घरमै झुन्ड्याएर हत्या
इजरायलका युवाले ११०० वर्ष अगाडिको सुनका सिक्का फेला पारे
बार्सिलोना छाड्न चाहेको मेस्सीको पत्र - BBC News नेपाली
टिकटकका सीईओले दिए तीन महिनामै राजीनामा
अफगानिस्तानमा बाढीले ७० को मृत्यु
जापानमा हेसेन टाइफूनको चेतावनी, दुई लाखभन्दा बढीलाई ठाउँ खाली गर्न आदेश
धार्मिक क्षेत्रमा 'निर्वस्त्र भिडिओ खिचेपछि' भारतमा फ्रान्सेली महिलालाई मुद्दा - BBC News नेपाली
ला लिगाको नयाँ सिजनको खेल तालिका सार्वजनिक
सिंगापुर र ब्रिटिस आर्मीमा कोटा घटाइयो
गोहीको छालाले बनेको हजारौँ डलर मूल्य पर्ने झोला जलाइने - BBC News नेपाली
झिँगा धपाउन खोज्दा घरमा विस्फोटन - BBC News नेपाली
अवैध निर्माण भन्दै बीएमसीले अभिनेत्री कंगनाको अफिस भत्कायो
५० वर्षमा विश्‍वबाट ६८ प्रतिशतले जीवजन्तु घटे, मानवीय क्रियाकलाप मुख्य कारण
संगीतकार रहमानमाथि ३.४७ करोड कर छलीको आरोप
स्टार खेलाडीबिनाको पीएसजीलाई मेट्जको चुनौती